Maxay wajaheysaa gabdha Soomaaliyeed ee gilgishay Washington | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxay wajaheysaa gabdha Soomaaliyeed ee gilgishay Washington
Maxay wajaheysaa gabdha Soomaaliyeed ee gilgishay Washington
Caawa waxaan hortiinna taaganahay anigoo ah xildhibaanadda la doortay ee aqalka Koongareeska, iyadoo dad fara badan oo cusubna ay magaceyga ku daba qoran yihiin”, oraahdaas waxay ka mid ahayd hadalladii ay tiri habeenkii lagu dhawaaqay iney ku guuleysatay doorashada.
Taageerayaal badan oo la dhacsan fikirkeeda ayaa sacab aan kala joogsi lahayn kusoo dhaweeyay markii ay hanatay kursiga 5-aad ee gobolka Minnesota u matalaya aqalka wakiillada, bishii Nofembar ee sannadkii 2018-kii.
Haweeneydan 37 sano jirka ah oo waliba ah hooyo dhashay saddex carruur ah ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee Soomaali-Mareykan ah, kuna dhashay qaaradda Afrika oo loo doorto Koongareeska.
Waxay sidoo kale taariikhda ku gashay iney noqotay gabadhii 2-aad ee Muslim ah, oo abid ku biirtay xildhibaannada golaha wakiillada Mareykanka.
Ms Omar ayaa abuurtay xiiso hor leh oo siyaasadeed iyo cambaareyn, tan iyo markii xilka loo doortay, iyadoo noqotay mid ka mid ah siyaasiyiinta da’da yare e ruxay Washington, maadaama ay baddaleen hadalladii looga bartay siyaasiyiinta u badan caasimadda Mareykanka.
Dhawaan waxay si adag su’aalo u weydiisay dan jiraha cusub ee uu madaxweynaha Mareykanka u magacaabay dalka Venezuela, muuqaal laga duubay kulankaas ayaana si weyn ugu faafay baraha xiriirka bulshada.
Hase ahaatee, inkastoo ay taageero badan la kulantay, haddana waxaa soo wajahay caqabado xoog leh.
Waxaa Ilhaan lagu eedeeyay inuu ku jiro fikir “Yuhuud naceyb ah”.
Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay taageerto ama ol’ole dhaqaale aruurin ah u sameyso qalalaasaha ka dhaca gobolka laga soo doortay ee Minnesota.
Dhawaan waxaa warbaahinta Israel qabsatay arrinta la xiriirta “Yahuud Nacaybka” lagu dhaliilay Ilhaan Cumar, iyadoo wargeysyada ugu afka dheer Israel ay ka qoreen maqaallo weerarayay Ilhaan.
Dhanka kale, tan iyo markii Ilhaan la doortay, waxay waxay xurguf u dhaxeysay iyada iyo madaxweyne Donald Trump.
Gabadhan ayaa kasoo jeedda xisbiga Dumuqraaddiga ah ee Mareykanka, kaasoo siyaasiyiintiisa ay si weyn uga soo horjeedaan hannaanka maamulka Trump.
Fikir noocee ah ayey heystaan taageerayaasheeda?
“Gabadh qaxooti ah ayaa halkan timid waxayna rumeysay riyada dadka Mareykanka ah”, waxaa sidaas BBC-da ku yiri Awmam Mahdi, oo isagana ka mid ah Soomaalida qaxootiga ahaa ee ku sugan Mareykanka.
“Waxay ila tahay guusheeda iney tahay mid ay ku farxayaan dhammaan dadka soo galootiga ah”, ayuu yiri Mahdi oo dagan gobolka Ohio.
Wuxuu Ilhaan ku tilmaamay qof ay ku dayan karaan jiilka hadda soo koraya ee doonaya iney heer sare gaaraan.
Previous articleAqalka Hoose oo taageeradii militari ka jaray isbaheysiga Sacuudiga
Next articleDawlada Kenya oo Xidhiidhkii Dublamaasi u jartay dawlada farmaajo,